High Quality ၏စက်များအတွက်အမျိုးမျိုးသော SK ကို Collets, Precision SK Collets အကောက်ခွန် SK Collets, SK ကို Collets ထောက်ပံ့
Home > ထုတ်ကုန်များ > နွေဦး ColletsSK ကို Collets
SK ကို Collets ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, SK ကို Collets, Precision SK Collets ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, စိတ်ကြိုက် SK Collets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
High Quality SK ကို Collets SK10 Collets
High Quality SK ကို Collets လမျးဖွောငျ့ Collet
High Quality Silver, အရောင် SK ကို Collets
High Quality Silver- အရောင် SK ကို Collets
CNC ခုံစိတျအပိုငျး SK ကိုနွေဦး collets
High Quality ပါဝါသံမဏိ SK ကို Mills စက် Collet
Supply နိုင်ခြင်း: 10000PCS/MONTH
High Quality Silver, အရောင် SK ကို Collets လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ High Quality Silver, အရောင် SK ကို Collets / SK ကို COLLET, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet...
အမှတ်တံဆိပ်: tool ကိုပင်
Supply နိုင်ခြင်း: 1000000/year
CNC ခုံစိတျအပိုငျး SK ကိုနွေဦး collets ငါတို့သည်လည်းထိုကဲ့သို့သော er collets, နှိပ် collets, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစင်တာများ, တွင်ခုံ Chuck, စက်ဒု, စသည်တို့ကဲ့သို့သောအခြားဆက်စပ်ကိရိယာများ, ထောက်ပံ့နိုင်ဘူး။ 1 ။ DIN6499B SK collets 2. 65 MN SK collets 0,005 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3. Precision; 0,008 သို့မဟုတ် 0.015mm 4....
ထုပ်ပိုး: Plasti သေတ္တာ
High Quality ပါဝါသံမဏိ SK ကို Mills စက် Collet SK ကို Mills စက် Collet လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ High Quality SK ကို Collet 0.005mm, 0.01mm, 0.02mm ဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။...
တရုတ်နိုင်ငံ SK ကို Collets ပေးသွင်း
လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ SK ကို Collets အမြင့် Precision Collets Mills Collet 0.005mm, 0.01mm, 0.02mm, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, ထုတ်လုပ်သူများယုံကြည်မှုအများစုအားဖြင့်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု။ အားလုံးထုတ်ကုန်ဂျာမန် Din 6499 သတ်မှတ်ချက်များတိကျကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အညီ, တိကျကြိတ်ဖြစ်ကြသည်။
1. ပါဝါ Clamp စွမ်းရည်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှု
2. တစ်ဦးကတန်း runout 0.015mm, AA ကိုတန်း runout 0.008mm
အထူးပစ္စည်းသံမဏိလုပ် 3. : 65Mn
4. ခွန်အား: HRC 44-48
ပျင်းစရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြု 5.
စိတ်ကြိုက် SK Collets
စက်များအတွက် SK ကို Collets
SK ကို Collet Nut